I-Midway Hotel - Phakathi enhliziyweni yakho konke - I-Airbnb
I-Midway Hotel - Phakathi enhliziyweni yakho konke
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Lee-Ann
· amakamelo okulala 18
· imibhede engu-21
· Izindawo zokugeza ezingu-18
Phuma endaweni ephithizelayo yedolobha elikhulu eliphithizelayo futhi ungene endaweni epholile yekamelo lakho lokwamukela.
Uzothola imibala epholile eluhlaza ye-Savannah ebonakala ekuhlobiseni kwesitezi sokuqala, ebizwa nge-Savannah.
Umdlandla wedolobha uvela ngeqoqo eliguquguqukayo lesitezi sesibili, i-Downtown.
I-Waterfront esitezi sesithathu inezici ze-geometric blues ezibonisa ubunzulu behabhu lezentengiselwano le-Waterfront.
Kusuka enhlokodolobha yezentengiselwano yedolobha lase-Port-of-Spain kuya ezindaweni ezivulekile zase-Savannah, i-Port-of-Spain iyinhliziyo nomphefumulo weTrinidad ne-Tobago. Futhi yilapho uzosithola khona – enhliziyweni yakho konke.
I-Midway Hotel iyi-Boutique Hotel ese-No.66 Edward Street, phakathi kwe-Kings Wharf ne-Kumkanikazi 's Park Savannah. Kungakhathaliseki ukuthi ulapha ebhizinisini noma ezokuzijabulisa noma kokubili, sikulungele ukukwamukela njenge-Trini yangempela kuphela.
Phumula egcekeni lethu elithokomele elingaphandle bese ujabulela imuvi yendawo ngobusuku bebhayisikobho. Kukhona iziteshi zetiye nekhofi esitezi ngasinye futhi uma sekuyisikhathi sokudla, usuthole i-Impera! I-Midway Hotel inikeza isidlo sasekuseni sendawo esiphelele esifakiwe ezindlekweni zekamelo. Ungakhetha izindawo zokudlela ezimbili ezinikeza izinhlobo ezihlukahlukene zezinto ezikhethekile ‘zasepulazini kuya etafuleni'.
Idolobha elikhulu lase-Port-of-Spain linikeza okuhle kakhulu kuwo womabili amagama. Kokubili yi-mecca enamandla yamasiko kanye ne-oasis ephumuzayo yezimangaliso zemvelo. Ungaya emidlalweni, imibukiso nemibukiso, udle ezindaweni zokudlela eziyinkimbinkimbi, ujabulele izinhlobo ezihlukahlukene zokudla okumnandi kwasemgwaqeni noma uthathe uhambo lwezinyawo ukuze uzibonele ezakhiweni ezingokomlando kanye namasayithi. Uma ukhetha ukuphumula emvelweni, kunamapaki amahle amaningana atholakala kulo lonke idolobha futhi, khona kanye emgwaqweni ovela kuwe yiNdlovukazi engokomlando epaki i-Savannah – ama-acres endawo ebanzi evulekile enotshani nezihlahla ezinhle eziqhakazayo.
Noma nini phakathi nonyaka isikhathi esihle sokubona i-Midway Hotel, kodwa uzoba nesihlalo sangaphambili sombukiso omkhulu kakhulu emhlabeni! I-Trinidad Carnival yenzeka ngaphandle nje kwefasitela lakho. Fika e-Port-of-Spain Panyards kalula noma uphefumulelwe umoya uthatha izindawo nemisindo unethezeke kuvulandi wakho.
Ngihlezi ngitholakala endaweni phakathi nosuku noma ngeselula noma nini.